दलित भनेर थाहा पाएपछि खानपिन लगायत हरेक क्षेत्रमा बेग्लै व्यवहार « जागरण मिडिया सेन्टर
Home » अन्तरवार्ता » दलित भनेर थाहा पाएपछि खानपिन लगायत हरेक क्षेत्रमा बेग्लै व्यवहार
दलित भनेर थाहा पाएपछि खानपिन लगायत हरेक क्षेत्रमा बेग्लै व्यवहार
चैत १७, जागरण मिडिया सेन्टर ।
विभेदरहित समाजको कल्पना शान्ति परियारको बाल मानसपटलमै थियो । समयक्रमसँगै उनले विभेदरहित समाजको स्थापना राजनीतिबाट मात्र सम्भव छ भन्ने बुझिन् । त्यसका लागि उनी कांगे्रसमा संलग्न भइन् । त्यसो त उनी बसोबास गर्ने स्थान कांगे्रसमय थियो, त्यो प्रभावबाट पनि उनी अछुतो रहन सकिनन् । पदभन्दा पनि उनलाई काम गरेर देखाउनु छ, त्यसैले उनी कांगे्रसको आदर्श समाजवादलाई च्यापेर अहोरात्र खटिरहेकी छन् । यिनै परिवेशमा कुमार राउतको जिज्ञासामा शान्ति यसरी प्रस्तुत भइन् :
० जातीय मुक्ति आन्दोलनमा हुनुहुँदो रहेछ नि ?
– स्कुल पढ्दा होस् अथवा छरछिमेकमा आफूले भोगेको जातीय विभेदको तीतो अनुभव अबको पछिल्लो पुस्ताले बेहोर्न नपरोस् भन्ने मेरो मान्यता हो । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि जातीय विभेद हुनु भनेको देश र समाजकै लागि लाजमर्दो हुन्छ । त्यसैले नेपाली कांगे्रसमा समाहित भएर जातीय मुक्ति आन्दोलनमा छु ।
० विभेदको तीतो अनुभव ?
– यो सुनाइ राख्नुपर्ने विषय नै होइन, नेपाली समाजमा घामझैं छर्लंग देखिएकै छ नि । होटलमा चिया खाए, ग्लास माझ्नुपर्ने, सहर बजारमा दलितले डेरा नपाउने समस्यालगायत प्रशस्त विभेदका उदाहरण छन् ।
० तपाईंको व्यक्तिगत अनुभव सोधेको ?
– साथीभाइबाट विभेद भएको त खासै अनुभव छैन, तर साथीभाइको घरमा जाँदा बाहिर बस्नुपर्ने, दलित भनेर थाहा पाएपछि खानपिनलगायत हरेक क्षेत्रमा बेग्लै व्यवहार गरिएको अनुभव छ ।
० दलित र गरिब त कम्युनिस्ट पो हुन्छन् भनिन्छ नि ?
– कम्युनिस्टहरू भाषण गरेर दलित र गरिबको मन जित्न सिपालु हुन्छन्, तर काम फिटिक्कै गर्दैनन् । उनहरू जे बोल्छन्, त्यो पु¥याउँदैनन्, भोट बैंकका रूपमा उनीहरू दलित र गरिबलाई युज गर्छन् । तर, कांगे्रस पार्टी त्यस्तो होइन, जे भन्छ त्यो गर्छ । र, हामीले हैसियतअनुसार काम गरेर पनि देखाएका छौं ।
० के गर्नुभयो ?
– आफूले गरेको काम आफैले बेलीविस्तार लगाउनु राम्रो हुँदैन होला, त्यसैले मेरो कामको मूल्यांकन अरुबाट गराउनुहोस् । चितवनमा म अध्यक्ष भएपछि पहिलो काम रक्तदानबाट सुरु गरें । रगत सबैको एउटै हो भन्ने म्यासेज दिन रक्तदानबाट काम सुरु गरेकी हुँ । पछिल्लो कार्यक्रम चाहिँ प्रजातन्त्रमा योगदान पु¥याउने दलित वृद्धाहरूलाई सम्मान गरें ।
० कांग्रेस त बूढाखाडाको पार्टी होइन ?
– बूढा, युवा, तरुण, तन्नेरी, विद्यार्थी, सबै जातजातिको साझा पार्टी हो– कांगे्रस । बूढाखाडाको अनभुवबाट पाठ सिक्दै युवाहरूले पार्टी हाँक्नुपर्ने बेला आइरहेको छ । हत्तारिनु हुँदैन, अत्तालिनु हुँदैन, यो देशको मुहार फेर्ने र सबैको साझा फूलबारी बनाउने जिम्मेवारी नेपाली कांगे्रसकै हो ।
० नेविसंघको त अधिवेशन गर्नसकेको छैन ?
– हो, यो चाहिँ कांगे्रसमा चिन्ताको विषय भएको छ । नेता उत्पादन गर्ने नर्सरीमै खडेरी लागेको अवस्था दुःखदायी हो । अधिवेशनका लागि विद्यार्थीलाई काठमाडौं बोलाएर थानकोटको डाँडामा अलपत्र पार्ने नेतृत्वले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ । कांगे्रसको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत भइसक्यो ।
० को जिम्मेवार छ ?
– व्यक्तिलाई म कसरी तोकू ? नेतृत्वमा बस्ने सबैले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । खास पार्टी नेतृत्वलाई कन्भिन्स गरेर अधिवेशन गर्न नसक्ने अहिलेको नेविसंघ कार्यसमिति नै निक्कमा हो भन्दा फरक पर्दैन होला ।
० दलित संघलाई चाहिँ पार्टीले न्याय गरेको छ ?
– राजनीतिमा कसैले स्पेस दिँदैन, आफैंले बनाउने हो । म पनि जिल्लामा निर्वाचित अध्यक्ष हुँ । दलित संघ विधानअनुसार आफ्नै लयमा अघि बढेको छ । अधिवेशनले चयन गरेको नेतृत्वले संघ अघि बढेको छ । संघले आफ्ना गतिविधि निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको छ ।
० पार्टीमा दलितको स्थान ?
– कांग्रेसमा बीपी कोइरालाको जुन दूरदृष्टि छ, त्यसैबाट प्रभावित भएर म कांगे्रसमा लागेकी हुँ । उहाँले पहिलो महामन्त्री दलितलाई नै बनाउनुभएको थियो । अहिले पनि जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रमा दलितको प्रतिनिधि रहन्छन् । कम्युनिस्टबाट कुन चाहिँ नेता उदाएका छन् ?
० छैनन् र ?
– होलान् एकाध, देखाउनका लागि पनि समेटिएको होला । तर कांगे्रस पार्टीमा जस्तो दलितले अरु पार्टीमा अवसर पाएका छैनन् होला भन्ने मेरो मान्यता हो ।
० कांगे्रसको जुझारु तपाईं दलितमुक्तिमै सीमित हुनुहुन्छ ?
– पदका लागि मैले राजनीति गरेको होइन । म आफ्नो क्षेत्रमा रहेर निरन्तर काम गरिराख्छु । पार्टीले आफूलाई योग्य देखेर जिम्मेवारी दियो भने पछि हट्ने कुरो हुँदैन ।
० पढाइ लेखाइ ?
– पढ्न चाहिँ धेरै सकिएन । दलित आन्दोलन, खेल क्षेत्र र महिला भएकाले एसएलसीभन्दा बढी पढ्न सकिनँ ।
० कसरी नि ?
– पढाइ र खेल क्षेत्रलाई एकैसाथ अघि बढाउँदै थिएँ । तेक्वान्दो खेलाडी हुँ, एसएलसी दिएको थिएँ, तेक्वान्दोमा ब्ल्याकबेल्ट लिने बेला भएको थियो । त्यहीबेला विवाह भयो । विवाहपछि दुवै क्षेत्र त्याग्नुप¥यो, दुई सन्तान हुर्केपछि दलित आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएँ ।
– हो, हामी दुवै तेक्वान्दो खेलाडी थियौं । खेल क्षेत्रमा सहयात्रा गर्दागर्दै हामी नजिकिएछौं । यही नजिकको सम्बन्ध पछि विवाहमा परिणत भयो ।
० पहिलो भेटको सम्झना छ ?
– किन नहुनु नि ? गेम खेल्न जाँदा भरतपुरको गेस्ट हाउसमा भएको हो । उहाँको नाम काशीराम विक हो । अहिले नेपाली सेनामा हुनुहुन्छ । हाम्रो दुई छोरा छ, एउटा सैनिक स्कुल पढ्छ, एउटा मसँगै छ ।
० कसले पे्रम प्रस्ताव राख्यो ?
– महिलाहरूले प्रस्ताव राख्ने वातावरण हामीकहाँ बनिसकेको थिएन र अहिलेसम्म छैन । त्यसैले उहाँले नै तिमीलाई मन पराउँछु, हामी विवाह गरौं भन्नुभयो, मैले ओके गरें ।
० विवाहका लागि कति कुर्नुप¥यो नि ?
– माया बसेको एक÷डेढ वर्षपछि नै हाम्रो विवाह भयो । फिल्म हेर्न जाने, एकान्तमा भेट्ने तथा मायापे्रमका कुरा गर्ने वातावरण थिएन । उहाँको रोजाइलाई मैले स्वीकृति मात्र दिएकी हुँ ।
० जिस्काउनेलाई ठटाउन तेक्वान्दो सिक्नु भएको हो ?
– होइन, त्यसो ग¥यो भने खेलको दुरुपयोग हुन्छ, दुरुपयोग भयो भने बद्नाम हुन्छ, त्यस कुरामा म सचेत थिएँ । खेलले शारीरिक र मानसिक विकास गर्नुका साथै आत्मविश्वास जगाउँछ ।
० कहिलेकाहीँ ठटाएको अनुभव छैन ?
– त्यसो त अहिले पनि यो शान्तिमा अशान्ति भयो भने बेग्लै रूप हुन्छ, तर झट्ट सम्झन्छु म त राजनीतिक कार्यकर्ता पो हुँ, त्यसपछि सम्हालिन्छु ।
० कसरी चलेको छ घर ?
– पहिले पसल गर्थें, अहिले त्यो पनि छैन । श्रीमान्को कमाइले घर चलेको छ ।
साभार : नेपाल ब्रिटेन ( विभेद बिरुद अभियान)
By जागरण मिडिया सेन्टर in अन्तरवार्ता on March 31, 2015 .
← बाहुनको छोरा जनै लगाएर जुत्ता सिलाउछन बिरेन्द्र शर्मा	राजभण्डारी र देवकोटालाई दयाराम परियार मानव अधिकार पुरस्कार →